Abafundi badinga ukufundiswa ngqo ngothisha - Ilanga News
Home Izindaba Abafundi badinga ukufundiswa ngqo ngothisha
Abafundi badinga ukufundiswa ngqo ngothisha
UNOBHALA weSadtu KwaZulu-Natal, uNomarashiya Caluza.
ISIKHATHI esikuso sinzima ngokwedlulele njengoba wonke umuntu eNingizimu Afrika kumele ahloniphe imigomo yokuvalwa kwezwe (lockdown) okwamenyezelwa nguMengameli Cyril Ramaphosa ngenyanga edlule.
Lokhu kwakuchaza ukuthi nezikole ziyavalwa. I-Sadtu KwaZulu-Natal kuyiphathe kabi kakhulu ukulahlekelwa yilungu layo ngenxa yaleli gciwane elihlasele umhlaba wonke, iCovid-19.
Esikubonayo kwenzeka manje ikakhulukazi emfundweni yabantwana, akekho okujabulelayo ngoba ukuhlala ekhaya, ungayi emsebenzini kakumnandi kanjalo nokungafundi kwabantwana.
Othisha kabajabule ngalesi simo ngoba umsebenzi wabo uncike kakhulu ekusebenzisaneni nezingane abazibhekile okuyilapho (uthisha) ekwazi ukubona ngisho nengasebenzile kahle, isithule ingabuzanga lutho kodwa uthisha ngekhono lakhe ube eseyiphindela ingane ayilekelele ezifundweni.
Sibonile ukuthi umnyango wezemfundo nabanye abanothando lwemfundo baqhamuke namasu okulekelela izingane nakuba zisemakhaya, okuyisu elihle ngoba hleze zikhohlwe wumsebenzi wesikole, zinake ukuhlala emakhaya okungenza zigcine sezingena ezintweni ezingalungile.
Sithe sizibuka lezi zinhlelo ezilekelela abantwana komabonakude, silalela emsakazweni nakwi-social network, saba nokukhathazeka ukuthi kazi zonke izingane ziyingxenye yini yalezi zinhlelo.
Thina siyiSadtu KwaZulu-Natal sibe sesenza uhlelo lokubheka ukuthi kulezi zingane ezenza umatikuletsheni ngabe ngokolwazi esinalo nakothisha abangamalungu ethu zinawo yimi ama-smart phone, omabonakude, i-internet connection emakhaya azo ngoba singajabulela uhlelo oluqhamukile kanti kalusizi.
Esikutholile wukuthi zimbalwa izingane ezinalezi zinto okwenza sibe nesiphetho sokuthi izingane eziningi kaziyona ingxenye yalokhu kufunda futhi kazitholi sizo kulezi zinhlelo okuthiwa yi-digital learning/ e-learning, emsakazweni nakomabonakude.
Sibe sesixoxa nomnyango ukuthi okungenani uxhumane nazo zonke iziteshi ezincane zemisakazo, basebenzisane ukuze zonke izingane zizokwazi ukusizakala.
Enye inkinga wukuthi noma ingane inawo umakhalekhukhwini kodwa i-data kunzima ukuba zibe nayo, empeleni iyinkinga enkulu. Siyethemba ukuthi umnyango uzoxhumana neziteshi zemisakazo yomphakathi.
Okunye esikubekile emnyangweni wukuthi kuzomele kufundiswe kusuka phansi umsebenzi wesigaba sesibili sonyaka, umnyango ungacabangi ukuthi usuzoqhubeka la ugcine khona kulezi zinkundla ezingenhla.
Empeleni kumele kube wukuthi kubuyekezwa umsebenzi wesigaba sokuqala sonyaka kuphela kulezi zinhlelo ezi-online.
Kuyona yonke into noma ngabe inzima kanjani, kumele kucatshangwe isu lokuthi kuzokwenziwa kanjani uma kuvulwa izikole. Umnyango sixoxile nawo sazifuna nezinhlelo (umnyango) onazo.
Okokuqala nje kumele kuqinisekiswe ukuthi izikole zinazo zonke izidingo zokuphila ngaphansi kwegciwane.
Njengoba sazi ukuthi izikole zethu kazilingani ngobukhulu nangokwemali eziyitholayo, kungaba kuhle kube wumnyango ezingeni lesifundazwe othenga ama-sanitizers, izifonyo zasema-khaleni (masks) bese uzisabalalisa ezikoleni.
Siwujabulele umbiko womnyango uma ubeka ukuthi uzokwenzenjani ukuqinisekisa ukuthi kuyaqhelelwana (social distance) ukuze kuqinisekiswe ukuthi iyagcinwa imigomo yokuphepha ezikoleni.
Uma kwenzeka uGrade 12 uvula kuqala bese uyiswa ezikoleni okuhlalwa kuzona ngaphakathi (boarding school), kuzomele umnyango wethule izinhlelo zawo kwiProvincial Education Labour Relation Council (PELRC) ikakhulukazi ezintweni ezithinta othisha.
Lokhu kubalulekile ngoba kungaqinisekisa izinga lokusebenza ukuthi lisesimeni esihle.
Okokugcina, sizwakalisa ukuphatheka kabi ngokugqekezwa kwezikole nokuntshontshwa kwempahla yezikole.
Amaphoyisa mawaluphenye lolu daba.
Ukuntshontshwa kwezinsizakufunda nokufundisa kufana nokuthi kwebiwe ilungelo lomfundi lokufunda. Sinxusa imiphakathi ukuba ivikele izikole zayo, yelekelele nasekutheni kutho-lakale izigebengu.
UNGUNOBHALA we-Sadtu KwaZulu-Natal
Previous articlekusengaphindeka kwezemfundo okwenzeka emuva kwesiteleka sango-2007
Next articleNabadlali mabeseke abantulayo kulolu sizi